ကွမ်းပြသနာ ငယ်စဉ်ခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ကွမ်းပြသနာ ငယ်စဉ်ခါ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 21, 2016 in Environment, Opinions & Discussion | 10 comments
ဒီချုပ်အစိုးရ လုပ်နေတဲ့ ကွမ်းမစာရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောခြင်တယ်။ ကွမ်းစားတာ ညစ်ပတ်တယ်၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တယ် လူတိုင်းလာဘ်ခံပေမဲ့ ကွမ်းမရောင်းရ တားမြစ်မှုကို အတော်များများ ကန့်ကွက်တာ တွေ့ရတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း မစားနဲ့သာ ပြောတယ် ကွမ်းနဲ့ အသက်မွေးသူကို ဘယ်လို အစားထိုး ဖြေရှင်းပေးမည်ဆိုတာ မည်မည်ရရ ရှိဟန်မတူ။ ဒီနေရာမှာ ကွမ်းနဲ့ အသက်မွေးသူနဲ့ စီးပွားဖြစ်သူ ၂ခုခွဲမြင်သင့်တယ်။ အသက်မွေးသူဆိုတာ ကွမ်းစိုက်တောင်သူ၊ ကွမ်းနဲ့ကွမ်းအဆာပလာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူ ဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် လာဘ်လုပ်လာဘ်စား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူတွေပေါ့။ စီးပွားဖြစ်သူကတော့ လာဘ်တဆုပ်စာ အချီကြီး လုပ်နေသူ၊ ကုန်သွယ်စီးပွားဖြစ်သူကို ဆိုလိုတယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့ သာမန်လာဘ်လုပ်လာဘ်စားကိုသာ ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်၊ စီးပွားဖြစ်နေသူကတော့ သူ့ဆီက ပြန်ရတာနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် နစ်နာတာ မတန်ဘူး၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ မလိုဘူး။ ကွမ်းနဲ့ တွဲဖက်စားတဲ့ ဆေးတွေ India ကလာတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေလည်း ကုန်သေး၊ တိုင်းပြည်လည်း ညစ်ပတ် ပျက်ဆီးကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကွမ်းစားသုံးမှု တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်တဲ့အခါ စီးပွားရေးသမားဆီက ထွက်လာမည့် အသံကို နားထောင်စရာ မလို။ ကွမ်းစားသူကို ဖယ်လိုက်ရင် ကွမ်းစိုက်တောင်သူ (ထုံးလည်းပါကောင်းပါမည်) အဓိကဖြစ်ပါမည်။ သူတို့အတွက် အစားထိုးသီးနှံ စီမံပေးဖို့ သိပ်ခက်ခဲမည် မထင်။ အရေးကြီးတာ ကနဦးကာလ သူတို့အစားထိုးစိုက်တဲ့ စီမံချက်သီးနှံ ဈေးကွက် အာမခံချက်ရှိရမည်။ မစိုက်ခြင်သူကို အစိုးရချေးငွေနဲ့ အခြားကူညီထောက်ပံ့မှု မပေးနဲ့။
ကွမ်းစားသူကြတော့ နိုင်ငံတဝှမ်း ဆယ်သန်းတောင် ကမည် မထင်။ တောနယ်တွေမှာ အရိုးစွဲနေသည်မို့ တားရအတော်ခက်မည်။ ကတ်တရာလမ်း ကွန်ကရစ် ပလက်ဖေါင်းမရှိ၊ အောက်ခံမြေသားချည်းမို့ ကွမ်းထွေးတဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်း ပျောက်ကွယ်သွားတာကြောင့် အမှုမဲ့ အမှတ်မှဲ့ ဖြစ်ကုန်သည်။ မြန်တြံ့နိုင်ငံဒေါ်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်နဲ့ မန်းတလေးလို မြို့ကြီးကလွဲလို့ အခြားနေရာများ မြို့နာမည်သာတပ်တယ် မြို့ထဲကလွဲရင် ကျန်နေရာအားလုံး မြေခင်းလမ်းများသည်။ ဒါကြောင့် တောသားမြို့တက် ကွမ်းတပျစ်ပျစ်ထွေးကောင်းသည် ထင်ကြမည်။ လူဆိုတာ အကျင့်ဖြစ်လျင် ပြင်နိုင်ခဲသည်။ နိုင်ငံခြားရောက်လည်း မဖြတ်နိုင်၊ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးပါ နာမည်ပျက်ရသည်။ မသိခြင်းထက် မပြင်နိုင်ခြင်း ဆိုခြင်ပါသည်။ မပြင်နိုင်ခြင်းကလည်း ဆော်ပလော်တီးမည့်သူ မရှိခြင်းကြောင် ဆိုလျင်မမှားပေ။ နယူးယောက်မှာ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ဆိုတဲ့ ကလားတန်းရှိသည်။ ကွမ်းယာခိုင်းလို့ရသည်။ တယာ တကျပ်ဆိုလား။ ရယ်ဒီမ်ိတ်အမှုန့်လည်း ရှိသည်။ အဲဒီနေရာ အဝင်လမ်းမ ပိတ်ထားပြီး နားနေုစရာ ခုံတန်းများခင်းထားသည်၊ ပန်းအိုးများချထားသည်။ ဘာဖြစ်သည် ထင်သနည်း.. ထုံးစံအတိုင်း ကွမ်းတံတွေးများ ရှိသည်။ မြန်တြံ့တဦးတည်းကြောင့်ဟု မယူဆစေလို။ ဘင်္ဂါလီ၊ ကလား၊ ပါကစ်စတန်နီ၊ နီပေါ၊ တိဘက်၊ မြန်တြံ့ အစုံလာကြသည်။ ပြောချင်သည်မှာ ကွမ်းရှိလျင် ကွမ်းတံတွေး ရှိမည်သာတည်း။
ကြက်ဥ ကြက်မ အစရှာ မရသလို ကွမ်းတရားခံ ရှာမရလျင် ဘိန်းဖြူ လိုပဲ စိုက်သူ ရောင်းသူ သုံးသူ အကုန်လုံး အရေးယူရမည် ဖြစ်သည်။ ရာဇဝတ်မှု မမြောက်သောကြောင့် နှိမ်နင်းပုံ နှိမ်နင်းနည်းသာ ကွာမည်။ စိုက်သူ ဝင်ငွေအစားထိုး စီမံပေး၊ ရောင်းသူကို စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်… စားသုံးသူကြတော့ ဒဏ်တပ်အရေးယူမှု နှင့်အတူ ပညာပေးမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ရမည်။ အမျိုးသား နှစ်ရှည်စီမံကိန်း အသွင်ဖြစ်ဖို့လိုသည်။ ဆေးလိပ် အရက်လိုမျုိးနှင့် တွဲဖက်ထားနိုင်သည်။ ယူအက်စ်တွင် ပြုလုပ်နေသော ဆိုဒါအချိုရည် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို အတုယူနိုင်သည်။ သိတဲ့အတိုင်း ဆိုဒါအချိုရည်သည် ဟိုးအရင်ထဲက သောက်သုံးလာတဲ့ အဖျော်ယမကာ။ ကဘာမှာ လူသိများတဲ့ အမေရိကန်ဘရင်းန် လပြာပါဆို ကိုကာကိုလာနှင့် ပက်စီကိုလာ ရှေ့တန်းတွင် ရှိသည်။ ငယ်စဉ်ထဲက ကြီးသည်အထိ အစားနှင့်တွဲသောက်သည်။ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်သည်၊ ကိုလက်စထရော အလွန်တက်သည်၊ သကြားဓါတ် သိပ်များသည်။ ဝခြင်းတရားခံ ဒင်းဖြစ်ကြောင်း သိချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ မျိုးဆက်အလိုက် စွဲနေပြီမို့ အတော့်ကို မလွယ်ကူ။ ဖြတ်ဖို့ မပြောနှင့် ၈၀ခုနှစ်လွန်နှစ်များက ကိုကာကိုလာကုမဏီမှ ၄င်းတို့၏ဖျော်ရည် အရသာပြောင်းရန် ကြိုးစားမှုကိုပင် စားသုံးသူများ၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကန့်ကွက်ဆန်ဒပြခြင်းခံရသဖြင် လာဘ်လျော့ခဲ့ရဖူးသည်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြင့် အစိုးရမှ မလုပ်မဖြစ် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အောင်မြင်မှုများ ရလာသည်။ ပြည်သူလူထုကို ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်သည်၊ ပညာရှင်များ ဆွေးနွေးသည်၊ သကြားနှင့်ကယ်လိုရီ ပိုနည်းသော အချိုရည်များ ထုတ်လာရသည်။ လောကမှာ တခုလိုခြင် တခုလျော့.. အရသာကောင်းလျင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်၊ အရသာမကောင်းမှသာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သည်မို့ အချိုရည်သောက်သုံးမှု ဖွံ့ဖြိုးပြီးကဗာတွင် ကျဆင်းလာသည်။
အဲဒါထက် ပိုညှင်သာ အတုယူစရာ ကောင်းသည်က မျိုးဆက်သစ်အား ပညာပေးမှု ဖြစ်သည်။ စားသောက်ဆိုင်များတွင် ခလေးများနှင့် စားသည့်အခါ တွဲဖက်အနေနှင့် ရေ သို့မဟုတ် နွားနို့ တိုက်ရန် အကြံပေး ပိုစတာများ ထားရှိသည်။ မူလတန်း အထက်တန်း ကျောင်းပုရဝုဏ်တွင် ဆိုဒါအချိုရည် မရောင်းရ။ မကြော်ငြာရ။ တီဗွီ ၊ ဘေလ်ဘုတ်လို အများပြည်သူ မြင်နိုင်သည် နေရာများတွင် ဆိုဒါအချိုရည်ကြော်ငြာ ကန့်သတ်သည်။ အဲဒီမျိုးဆက် သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းနိုင်သွားပြီ၊ သူတို့မိဘတုံးကလို အချိုရည် မစွဲ၊ ဆေးလိပ် မစွဲတော့။ မသောက်ရကောင်းမှန်း သိပြီ၊ မသောက်ခြင်း ဖက်ရှင် ယူရကောင်းမှန်း သိပြီ။ မိဘတွေခေတ်မှာ မသိလို့ တမျိုး၊ ကြော်ငြာမှာ ကောင်းဘွိုင်မင်းသားပုံနဲ့ ဆေးလိပ်ခဲ၊ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ဆေးလိပ်ရှုဆိုတော့ ယောက်ျားပီသအောင် ဆေးလိပ်သောက်ရ၊ လူကြီးဖြစ်အောင် ဆေးလိပ်ရှုဖို့မလို။ ယူအက်စ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်လျင် နှာခေါင်းဝိုင့်းရှုံ့ဖို့ ဝန်မလေးကြတော့။ အခွန်အခ နင်းကန်ချပြီး လွယ်လွယ်ဝယ်မရအောင် အရောင်းထိန်းချုပ်တာလဲ ပါသည်။
မြန်တြံ့ပြည်မှာလည်း လူထုထောက်ခံမှု တခဲနက်ရထားတဲ့ ဒီချုပ်အစိုးရ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ပညာပေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန မဖျက်တာ အဲဒီအတွက် အသုံးချနိုင်သည်။ ကွမ်းစားမှု အသက်၁၀နှစ်မှ စသည်ဆိုပါက ယနေ့မှ စလုပ်လျင် လက်ရှိအစိုးရ ငါးနှစ်အချိန်ရမည်၊ စစ်တပ်အာဏာ မသိမ်းသေးလို့ နောင်ငါးနှစ် ထပ်အုပ်ချုပ်မည်ဆိုက ၁၀နှစ် ဖြစ်မည်။ အဲဒီအချိန် အသက်၂၀တန်းအတွင်း ကွမ်းအလေ့အကျင့် ပြတ်ပြီ။ ထို့ကြောင့် လူကြီးများ မစားစေခြင်းတနည်း၊ ခလေးသူငယ်များ မစားချင်စေရန် တနည်း မတူသော ပညာပေးမှု ရှိသင့်သည်။ အောင်မြင်မှုကတော့ မျိုးဆက်သစ် သောက်ခလေးများ အရွယ်ရောက် နှာပွချိန်တွင် မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဘယ်လို ပညာပေးမလဲ၊ ကွမ်းစားခြင်းသည် မကောင်း၊ အရည်မရ အဖတ်မရ၊ ပိုက်စံကို ခံတွင်းညစ်ပတ် ကင်ဆာဖြစ်သေ၊ အဲဒါတွေ ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယို ရုပ်ပြ ဇာတ်ကောင်များမှ ဖြန့်ဖြူးရန် လိုအပ်သည်။ အနုပညာရှင်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အရေးကြီးသည်။ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် အမျိုးသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မပါမနေရ ပါခိုင်းကြောင်း အဲဒီနည်းဖြင့် ကိုရီးယားကို ကဗာသိစေသည်။ ထိုနည်းတူ မြန်တြံ့ဇာတ်လမ်းများတွင် ကွမ်းစားသူကို အကျင့်ပျက်၊ ဆိုးသွမ်း၊ ယုတ်မာ၊ ကြာကူလီ၊ သစ်စာဖေါက် နေရာ ပုံမှန်ဖေါ်ပြပေးလျင်၊ ကွမ်းကြောင့်ဖြစ်သော ပြသနာများ ဇာတ်လမ်းထဲ ပုံမှန်ထည့်ပေးနိုင်လျင် မီးမလောင်ခင်တားသလို မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဖြင့် အမြစ်ပြတ် ဖြတ်တောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
တောင်လျင်ကွမ်းမကိုင် ဦးကြောင်ကြီး.. ငါကွ
ဗမာတွေကွမ်းစားတာ.. မူးယစ်ဆေးတမျိုးဖြစ်တဲ့.. ဗမာဆေးကြောင့်လို့ထင်တယ်..။
နုစဉ်ကများ.. ဗမာဆေးနဲ့ကွမ်းစားကြည့်တာ.. အံထွက်မတတ်..
နောက်တော့.. မထည့်ရမနေနိုင်ဖြစ်..။ စွဲတဲ့မူးယစ်ဆေးကိုး..။
ဗမာဆေး.. ကုလားဆေး.. မူးယစ်ဆေးကို မူးယစ်ဆေးလိုင်စင်.. အမြတ်ခွန် အထူးနှုန်း.. ထည့်ချလိုက်ပြီးရောလို့ထင်ပါတယ်..။
မြို့ညစ်ပတ်ရင်.. လူတွေကင်ဆာဖြစ်နှုန်းတက်လာရင်.. အဲဒါအတွက်နိုင်ငံတော်က ကုန်ကျစရိပ်ကို.. ၂ဆမြှောက်.. အခွန်အဖြစ်ကောက်…။
သဘောက.. မြို့ညစ်ပတ်လို့.. သန့်ရှင်းခ.. မြူနီစပယ်ဝန်ထမ်းလစာခ.. (ခန့်မှန်း) တနှစ်.. ၁ ဘီလီယံကျပ်…။
ပါးစပ်ကင်ဆာအပါအ၀င်..ကွမ်းစားလို့ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကြောင့်.. လူမှုဖူလုံရေး.. လုပ်အားဆုံးရှုံးမှု… ဆေးရုံတွေအလုပ်ရှုပ်မှု.. ဆရာဝန်အလုပ်ရှုပ်မှု.. နစ်နာကြေး.. ပေါင်း..(ခန့်မှန်း) တနှစ် ၁၀ဘီလီယံကျပ်ဆိုပါစို့…
အဲဒီငွေက.. မိုးပေါ်ကကျပြီးရတာမဟုတ်တာမို့.. စိုက်ပေးလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်က.. ငွေပြန်ရအောင်.. အမြတ်ခွန်အဖြစ်.. ကွမ်း..ဆေး..သမားတွေကို.. ၁၁ဘီလီယံ x ၂ = ၂၂ ဘီလီယံဖိုးရအောင်အခွန်ကောက်ယုံ..။
ဒီနည်းကို …ယူအက်စ်မှာ.. ဆေးလိပ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေအတွက်အခွန်ကောက်ရာမှာသုံးခဲ့တာပဲ…။
မတရားတင်ကောက်တဲ့အခွန်ငွေတွေကြောင့်.. ဆေးလိပ်ဈေးတွေ.. မြှင့်တင်ရတော့.. လူတွေသိပ်ဝယ်မသောက်နိုင်တော့…။
အပြောမာမွတ် အဖြေကြောင်ကြီး စကားပုံ ရှိတယ် အူးမာမွတ်ရဲ့။ ပြသနာက အခွန်မြှင့်ရင် မှောင်ခိုဈေးကွက် ပေါ်မှာပဲ။ အဲဒါ ထိန်းချုပ်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ ခိုးဆိုးလုယက် ရာဇဝတ်မှုတောင် မနိုင်သေးတာ။ အလေ့အကျင့်လုပ်ယူခြင်းနဲ့ တွဲလုပ်မှ အောင်မြင်မယ်။။ ဖမ်းယုန်သက်သက် အခွန်မြှင့်ယုန်သက်သက် မြဘူး။။။။။ ဥပမာဂျာ သန်ဆင်ခိုင်မ်ကို မင်းမလိုက်နဲ့ ပြောလို့ ရမလား။ အခြစ်ကို တားမြဂေါင်းဘူး… ကြောင်ကြီးရယ် မင်းကို ငါ ကြောင်သာမှတ် တော်ချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ငါ့သာမီး ကြောင်စားရိတ် တသန်း ကောလိပ်သွားဖို့ လျှာပါစို လျှာရင်း လျှာရင် လျှာကြီးထွက် ပင်ပန်းလို့ ဆိတ်ကုန် လောကဂျီးငြီးငွေ့ တောထွက် အဲတော့မှာ အူးမာမွတ် ဆိတ်ဧရမယ် မဟုတ်လား။
ကွမ်းစားသူဗီလိန်တွေ နဲ့ အစားထိုးရိုက်ရတော့မှာပေါ့နော်။
ကွမ်းအစား တခြားတစ်ခုခု စားဖို့ ဖန်တီးပေးလျှင် ကောင်းပါမည်။
အနော်ကတော့ ကွမ်းနှင့် ဖွေးဖွေး ဘယ်သင်းကို စားမည်နည်းဟု မေးလာလျှင်..ဖွေးဖွေးကိုသာ စားပါမည်ဟု ဖြေမည်။
ကွမ်းအစား ပီကေ ဝါးကြပါစို့….း)
ဆေးခြောက်ပါတဲ့.. ပီကယ်တောင် တရားဝင်ထုတ်ခွင့်ရှိနေပြီ..။
Order Cannabis Chewing Gum Online Now – Its Legal in All 50 States …
thenationalmarijuananews.com › Featured
Jun 26, 2015 – The industries first cannabis chewing gum. The hype can be misconstrued as this product does not have the psychoactive ingredient THC, but …
ကွမ်းက ကွမ်းသီး က ဆိုးကျိုးပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ကွမ်းရွက်ကတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ ကွမ်းရွက်က ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်တဲ့။
ကွမ်းစားတာ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင် . . . ကျန်းမာရေးကနောက် . . . လူကိုရုပ်ဆိုးစေတာက အရင် . . . ကွမ်းတံတွေးတွေက ရွံစရာကောင်းတယ် . . . ကားစပယ်ယာတွေ ပိုဆ်ိုးတယ် . . . ဘေးဘီမကြည့်ဘဲ ထွေးတယ် . ကားပေါ်က ခရီးသည် ဘေးကိုထွေးချတယ် . . . အောက်ကလူတွေ ညစ်ပတ်တယ် . . . လူတွေကို စည်းကမ်းရှိတတ်အောင် . . . ကိုယ့်လုပ်ရပ်က သူများကို မထိခိုက်စေရအောင် . . . ပညာပေးရမယ် . . .
နောက် Hiway ကားသမားအတော်များများက ကွမ်းစားပြီးမောင်းမှ အိပ်ချင်ပြေတယ် ပြောကြတယ် . . . သူတို့ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ် . . .
နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ လမ်းသွားရင်း ရှေ့ကလူ ဆေးလိပ်သောက်ပြီး ကိုယ့်ဘက်ကို အငွေ့တွေရောက်လာရင် ခဲနဲ့ပြေးထုချင်စိတ်ပေါက်တယ် . .
အဲလိုလူတွေများလာတဲ့နေ့… တတိုင်းပြည်လုံး တိုးတက်သွားမယ်..။